एटिएम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस् – Himalaya TV
एटिएम प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्
१७ फाल्गुन २०७३, मंगलवार १५:२४
काठमाडौं, १७ फाल्गुन । एटिएम प्रयोग गर्दा तपाई अलिकति पनि चुक्नु भयो भने ठूलो हानी बेहोर्न पर्ने हुनसक्छ । अहिले ह्याकरहरु यसरी फैलिएका छन् कि कुनै पनि बेला मौकाको फाईदा उठाएर एटिएम ह्याक गरिरहेका छन् ।
यस्ता ह्याकरहरुले तपाईको एटिएमको क्लोन बनाएर सबै रकम निकाल्न सक्छन् र तपाईलाई पत्तो पनि हुँदैन । यसले गर्दा तपाई आफ्नो एटिएम प्रयोग गर्दा कतिसम्म सजग हुनु पर्दोरहेछ त ?
सर्वप्रथम तपाई यो कुनै गलत प्रक्रृया नभएको एटिएम हो भनेर विश्वस्त हुनुहोस् । एटिएम मेशिनमा तपाई जहाँ कार्ड ईन्टर गर्नुहुन्छ त्यहाँ ह्याकरहरुले पोर्टेबल स्क्यानर फिक्स गरिदिएका हुन सक्छन् । यसको बनावट ठ्याक्कै मेसिनजस्तै हुन्छ र सजिलै छुट्याउन सकिदैंन ।
तर, यसलाई पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । यो ध्यान राख्नुहोस् कि सामान्यतया कार्ड ईन्टर प्वाइंटमा बत्ति बल्ने गर्दछ । तर स्क्यानरले गर्दा त्यो बत्ति सधैं अफ हुन्छ । यस्तै कुरामा ध्यान राखेर ठूलो हानीबाट बच्न सकिन्छ । एजेन्सी